Daawo Sawirro+Taliska ciidanka X.D.S. oo sheegay in ay heleen xog la xiriirta horjoogaha ugu sarreeya Al shabaab – Radio Muqdisho
Taliyaha Qeybta 43 Aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya general Ismaaciil Saxardiid oo wareysi gaar ah siiyay Wakaalada SONNA ayaa sheegay in xoggo ay heleen ay sheegayaan in Horjoogaha ugu sareeya Aragagxisada Al shabaab Axmed Diiriye uu ku dhuumaaleysanayo qeybo ka mid Gobalka Gedo.
Taliyaha ayaa sheegay in Horjooge Axmed Diiriye uu kasoo cararay Degmada Jilib ee Gobalka Jubada dhexe, kaddib Cadaadis xoggan oo uu kala kulmay Hawlgallada dhulka iyo Cirka ee Ciidamada Xoogga Dalka iyo Saaxiibada Caalamka ay ku ciribtirayaan Argagaxisada Al shabaab.
“Xogta aan helnay ayaa sheegaysa in Horjoogaha Al shabaab ugu sarreeya uu ku dhuumaaleysanayo qeybo ka mid ah Gobalka Gedo, isagoo ka soo cararay Degmada Jilib ee Gobalka Jubbada dhexe halkaas oo uu ku dhuumaaleysan jiray, isagoo ka baxsanaya hawlgallada iyo duqeymaha Ciidamada xoogga dalka iyo Saaxibada caalamka ay ka wadaan qeybo ka mid ah Koonfurta Soomaaliya”.
Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in Horjoogaha ugu sareeya Nabad diidka Al shabaab uu ugu cararay Gobalka Gedo inuu baxsado maadaama ay soo wajahday baqdin xoogan laakiin Sirdoonka Soomaaliya iyo ciidamadda Xoogga dalka ayaa ku bartilmaameedsan doono goob kasta oo uu ku dhuumaaleysanayo.
Sidoo kale General Ismaaciil Saxardiid Keedsane waxa uu sheegay nabadiidka Al-shabaab goobaha ay joogaan ay dhibaato ku hayaan shacabka ku nool isagoona balan qaaday in degaanadaasi dhawaan ay la wareegi doonaan ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya.
Ugu dambeyn Taliyaha ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka ay diyaar u yihiin dagaalka guud ahaan dalka looga saarayo Argagaxisada Al shabaab, iyagoo ay u dhameystiran yihiin qalabkooda, si fiicana loo dhiiri galiyay, waxay sidoo kale heystaan balanqaadyo dhiiri galin ay u sameeyaan Madaxda Qaranka oo waqti kasta garab taagan
Sawirro+Warbixin: Guulaha Safarkii Wafdigii D. F. Somalia ee Qatar